» कबिताNepali Sahitya Bikash UK – NLDC UK
Category Archives : कबिता
नया बर्षको शुभकामना एकाबिहानै बादलुको पर्दा खोलेर किरणको जुलुस शुभकामना बोकेर बषन्तको झण्डा फहराउन हर्ष,उल्लास,उमंगमा Share This
–हेमन यात्री धेरैपछि सम्झनाको साँघु तरेर तिमीले मेरो बारे सोध्यो– कसरी ढाटूँ म आफूलाई ? तिमीले बिर्सीहिँडेको मानिस म होइन भनेर । सप्पै–सप्पै बिर्सीहिँडेको तिमीले खै ! के सम्झ्यौ कुन्नी दुर देशमा पुगेर ? Share This
म दुर्बीन लगाएर नया नेपाल खोज्दैछु फोटोहरु समेटेर नया नेपाल खोज्दैछु Share This
Bhupi Sherchan – Ghanta Ghar घण्टाघर कुनै फाटेर कुनै मुसाले काटेर कुनै छोरा-नाति एक-एक गरी फौजका सब पुराना जर्सी सिद्धिए । Share This
-विश्व वातावरण दिवस २०१३-
छ्यांग छ्यांगति बगेका अनेकौं नदि, आकाशै छेकेर उभिएका सेता हिमाल, मूल फुटाउने हरिया पहाड, सुन्दर घर भित्रको सुख सुबिधा, यी सब देखेर, Share This
सिङ्गो जिन्दगी मुल्यहिन छ
सिङ्गो जिन्दगी मुल्यहिन छ जस्तै सागर किन्छस् भन्दा कस्ले किन्थ्यो र कोसँग? अनि हिरा बिक्न तयार कहिले भयो र? नबिकेको कहाँ छ र! अब पालो आत्माको छ म आत्मालाई निकालेर बजार भाउँ खोज्दैछु प्राय: आत्मा हिरा झै बिक्न चाहेन अनि आत्मा हिरा होइन रहेछ र त कसैले किन्न पनि चाहेन…
मरेको स्वाभिमान ??? – कोमल मल्ल
स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता सकिन्छ सकिन्न अक्षुष्ण राख्न ? म क्रान्तिकारि रुपान्तरणलाई पढन सुन्न र मनन गर्न शसस्त्र रगत आन्दोलनलाई बुझ्न बुदै बूदा समझौताहरुमा भिज्न गरुङ्गो मन खोल्ने अनुरोधमा न्यायकी देबी को तूलोमा राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय तत्वको निर्क्योल खोज्न िदनका िदन फेरि पनी पर्दैछु मसानमा मसानमा…
सानो कुरा – दुर्गाप्रसाद पोख्रेल
सानो कुराले किन चित्त फुक्छ सानै कुराले किन चित्त दुख्छ सानै कुराभित्र विवाद हुन्छ सानै कुराको किन याद हुन्छ । ठूला कुरामा सपना अडिन्न ठूला कुराले विपना सजिन्न ठूला हुनन् किन्तु यथार्थ भन्छ- सानो कुरा नै मनमा रहन्छ । सानै कुराभित्र मिठास हुन्छ सानै कुराभित्र सुवास हुन्छ ठूला कुरा सम्झ…
‘म देश लेख्छु’ – कोमल मल्ल
रहनु सहनु र बहनु भोगि रहेछु ? परदेशमा देश बोकेर मैले ?? सयौ फिट मुनीको दैिनक वहर दोहर मात्र पेट पुजाका लािग उक्सेको मन ? स्वप्न महल बोकेर कल्पनै कल्पनामा आस्वासन उनेर त पसिना छर्दैछु म एेतिहासिक देश बेलायत लण्डनमा म संपादक आफ््नै समाचार प्रकाशित गरि रहेछु मन काटेर यथार्थताको…